Job - Arthasansar
नेपाल प्रहरीले करिब ६०० को संख्यामा जागिर खुलाएको छ ।...
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले कर्मचारी आह्वान गरेकाे छ । ...
सोमबार, १४ भदौ २०७८, १४ : ३३
कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ठुलो संख्यामा कर्मचारी आह्वान गरेकाे छ । ...
मंगलबार, ०८ भदौ २०७८, १२ : १२
सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ठुलो संख्यामा कर्मचारी आह्वान गरेकाे छ । ...
मंगलबार, २६ साउन २०७८, १२ : ४५
सार्वजनिक संस्थानअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रत्यक्ष रूपमा २८ हजार ३६४ जना रोजगारीमा आवद्ध छन् । ...
शनिबार, १५ जेठ २०७८, ११ : ४५
समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले विभिन्न पदका लागि कार्मचारी आह्वान गरेको छ । ...
आइतबार, ०५ बैशाख २०७८, १२ : १४
साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाले विभिन्न पदहरुमा कर्मचारीहरुको लागि दरखास्त आव्हान गरेको छ । ...
आइतबार, २२ चैत्र २०७७, १३ : ४०
सरकारी ढिलाइले इजरायलको रोजगारी अलपत्र
श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इजरायलको छनोट कार्यविधि बनाउन आलटाल गरेका कारण नेपालले पाएको इजरायलको दुई हजार कोटा नै गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ । ...
बुधबार, १८ चैत्र २०७७, १५ : ०८
आस्कमी म्यानेजमेन्ट ले यहि मार्च ३१ देखि एप्रिल २, २०२१ सम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँगको मुख्य सहकार्यमा अनलाइन प्लेटफर्ममा आस्कमी भर्चुअल जब फेयर २०२१ सुरु गरेको छ । ...
बुधबार, १८ चैत्र २०७७, ११ : ४६
नव ललित बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले कर्मचारी आह्वान गरेको छ । ...
आइतबार, ०८ चैत्र २०७७, १२ : ००
जाल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ठुलो संख्यामा कर्मचारी आह्वान गरेकाे छ । ...
सोमबार, २४ फागुन २०७७, १६ : ५४
बैंकमा जागिर खाने हो ? नेपाल बैंकले माग्यो दुई सय जना कर्मचारी (विज्ञापनसहित)
नेपाल बैंक लिमिटेडले विभिन्न पदमा कर्मचारी मागरेको छ । बैंकले बैंकले सहायक केन्द्र तथा प्रदेशगतरुपमा सहायक प्रबन्धकदेखि कनिष्ठ सहायकसम्मका पदका लागि दरखास्त आव्हान गरेको छ । ...
शुक्रबार, २१ फागुन २०७७, ०९ : ०३
समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले कर्मचारी आह्वान गरेको छ । ...
विहीबार, २० फागुन २०७७, १३ : ४६
गुँरास लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले विभिन्न पदका लागि कर्मचारी आह्वान गरेकाे छ । ...
विहीबार, २० फागुन २०७७, १० : ५२
सालपा विकास बैंक लिमिटेडले विभिन्न पदका लागि कर्मचारी आह्वान गरेको छ । ...
सोमबार, १० फागुन २०७७, ०८ : ०८
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयले ठूलो संख्यामा कर्मचारी आह्वान गरेको छ । ...
आइतबार, ०९ फागुन २०७७, ११ : ०५
साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नायब महाप्रबन्धक पदका लागि कर्मचारीको माग गरेको छ । ...
समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले कर्मचारी आह्वान गरेको छ । कम्पनीले डिपुटी मेनेजर पदको लागि कर्मचारी माग गरेको हो । ...
मंगलबार, ०४ फागुन २०७७, ०८ : ०७
जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ ? आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्गलाई कर्मचारी चाहियो
आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडले कर्मचारी आह्वान गरेको छ । कम्पनीले सिनियर असिस्टेन्ट पदको लागि कर्मचारी माग गरेको हो । ...
सोमबार, ०३ फागुन २०७७, १२ : ४०
जागिर खाने हो ? माछापुच्छ्रे बैंकले माग्यो ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग्यो
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले ठूलो संख्यामा कर्मचारी आह्वान गरेकाे छ । ...
आइतबार, ०२ फागुन २०७७, १३ : ३२
'पठाओ'मा रोजगारीको अवसर बढ्दो
कोरोना कहरकै कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरले विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर खुम्चिएको सन्दर्भमा लोकप्रिय राइड सेयरिङ प्लाटफर्म 'पठाओ'मा भने दैनिक अनलाइन तालिम लिएर पठाओमा दर्ताभै काम गर्नेको सङ्ख्या बढेको बताइएको छ।
मंगलबार, २० माघ २०७७, १६ : ३२
जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ ? लघुवित्तमा जागिर खाने सुनौलो अवसर
सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले कर्मचारी आह्वान गरेकाे छ । ...
शनिबार, १७ माघ २०७७, १० : ०५
कृषि विकास बैंक कर्मचारीको विज्ञापन आवेदन शुल्क खल्ती मोवाइल वालेटबाट भुक्तानी गर्न सकिने
कृषि विकास बैंकले विभिन्न पदका लागि माग गरेको आवेदनको शुल्क मोबाइलमा खल्ती डिजिटल वालेटबाट भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । ...
शुक्रबार, ०९ माघ २०७७, १५ : २०
कृषि विकास बैंकले एकैपटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी आह्वान गरेको छ। ...
शुक्रबार, ०९ माघ २०७७, ०७ : ४६
सिन्धु विकास बैंक लिमिटेडले कर्मचारी माग गरेको छ । ...
आइतबार, २६ पुस २०७७, ०७ : ५२
लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले कर्मचारी आह्वान गरेको छ । ...
विहीबार, २३ पुस २०७७, ११ : ४९
मंगलबार, ०७ पुस २०७७, ०७ : १०
अर्थ संसार, काठमाडौँ - वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले विभिन्न पदका लागि कर्मचारी माग गरेकाे छ । ...
मंगलबार, २३ मंसिर २०७७, १२ : ४६
अर्थ संसार, काठमाडौं - समृद्धि फाइनान्स लिमिटेडले कर्मचारी माग गरेको छ । ...
मंगलबार, २३ मंसिर २०७७, ०७ : २६
अर्थ संसार, काठमाडौं - एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले कर्मचारी माग गरेको छ । ...
शुक्रबार, १२ मंसिर २०७७, ०८ : ०३
अर्थ संसार, काठमाडौँ - सिबिआई एल क्यापिटल लिमिटेडले कर्मचारी आह्वान गरेकाे छ । ...
शुक्रबार, १२ मंसिर २०७७, ०७ : ४७
सहकारीमा जागिर खाने हो ? जेष्ट बचतले माग्यो कर्मचारी (विज्ञापनसहित)
अर्थ संसार, काठमाडौँ - जेष्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले विभिन्न पदका लागि कर्मचारी माग गरेको छ । ...
बुधबार, १० मंसिर २०७७, १५ : ०६
जागिर खाने हो ? इमेज बचतलाई कर्मचारी चाहियो (विज्ञापनसहित)
अर्थ संसार, काठमाडौं - इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले कर्मचारी माग गरेको छ । ...
सोमबार, ०८ मंसिर २०७७, ११ : ०१
जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ ? उन्नति सहकार्य लघुवित्तले माग्यो कर्मचारी (विज्ञापनसहित)
अर्थ संसार, काठमाडौँ - उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले कर्मचारी माग गरेको छ । ...
आइतबार, ०७ मंसिर २०७७, १३ : १०
अर्थ संसार, काठमाडौं - साना किसान विकास लघुवित्तले कर्मचारी आह्वान गरेको छ । ...
बुधबार, २६ कार्तिक २०७७, ०९ : २६
जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ ? बेष्ट फाइनान्सले कर्मचारी माग्यो [विज्ञापनसहित]
अर्थ संसार, काठमाडौं - बेष्ट फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले कर्मचारी आह्वान गरेको छ । ...
मंगलबार, २५ कार्तिक २०७७, ०७ : २५
जागिर खाने हो ? सिटिजन्स बैंकले माग्यो कर्मचारी [विज्ञापनसहित]
अर्थ संसार, काठमाडौँ - सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले कर्मचारी आह्वान गरेकाे छ । ...
आइतबार, २३ कार्तिक २०७७, १७ : १०
जागिरको खोजीमा हुनहुन्छ ? हिमालयन वायो इण्डष्ट्रिजले माग्यो कर्मचारी [विज्ञापनसहित]
अर्थ संसार, काठमाडौं - हिमालयन वायो इण्डष्ट्रिज प्रालिले कर्मचारी आह्वान गरेको छ । ...
शुक्रबार, २१ कार्तिक २०७७, ११ : ३६
के तपाई जागिरको खोजीमा हुनुहुन्छ ? लघुवित्तमा काम गर्ने सुनौलो अवसर !
अर्थ संसार, काठमाडौं - नेपाल सेवा लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले कर्मचारी आह्वान गरेको छ । ...
सोमबार, १७ कार्तिक २०७७, १२ : ३१
जागिर खाने हो ? समृद्धि फाइनान्सलाई कर्मचारी आवश्यकता !
अर्थ संसार, काठमाडौं - समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले कर्मचारी आह्वान गरेको छ । ...
सोमबार, १७ कार्तिक २०७७, ०७ : २२
आकर्षण तलबसहित गृह मन्त्रालयले माग्यो १ सयजना कर्मचारी !
अर्थ संसार, काठमाडौँ - गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले कर्मचारी आह्वान गरेकाे छ । ...
विहीबार, १३ कार्तिक २०७७, १७ : २३
जागिर खाने हो ? प्रभु इन्स्योरेन्सलाई कर्मचारी चाहियो ! [विज्ञापनसहित]
अर्थ संसार, काठमाडौं - प्रभु इन्स्योरेन्स लिमिटेडले कर्मचारी आह्वान गरेको छ । ...
विहीबार, ०६ कार्तिक २०७७, ०९ : ४५
जागिर खाने हो ? सपोर्ट लघुवित्तले माग्यो कर्मचारी [विज्ञापन हेर्नुहोस्]
अर्थ संसार, काठमाडौं - सपोर्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले कर्मचारी आह्वान गरेको छ । ...
स्वावलम्बन लघुवित्तलाई कर्मचारी चाहियो ! [विज्ञापनसहित]
अर्थ संसार, काठमाडौं -स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको कर्मचारी माग गरेको छ । ...
सोमबार, ०३ कार्तिक २०७७, ०७ : ३५
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्समा जागिर खाने सुनौलो अवसर ! [विज्ञापनसहित]
अर्थ संसार, काठमाडौं - सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले कर्मचारी आह्वान गरेको छ । ...
शुक्रबार, ३० असोज २०७७, ०९ : ०४
जागिर खाने हो ? समृद्धि फाइनान्सले माग्यो कर्मचारी [विज्ञापनसहित]
अर्थ संसार, काठमाडौं - समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले कर्मचारी अह्वाह गरेको छ । ...
विहीबार, २९ असोज २०७७, ०६ : ५६
हाइड्रोपावरमा जागिर खाने सुनौलो अवसर, योग्यता कति चाहिन्छ ? (विज्ञापन हेर्नुहोस्)
अर्थ संसार, काठमाडौं - एचए हाइड्रोपावर प्राइभेट लिमिटेडले कर्मचारी आह्वान गरेको छ । ...
मंगलबार, २७ असोज २०७७, ०७ : ३८